China Highbay 100w ọka Bọlbụ China Manufacturers & Suppliers & Factory
Highbay 100w ọka Bọlbụ - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Highbay 100w ọka Bọlbụ)
100W ada oriọna ọkụ 3000K 220VAC E27
100W ada oriọna ọkụ 3000K 220VAC E27 Bbier 100W ada ọka oriọna 3000K , oke ọkụ okpomọkụ maka LED na ọkwọ ụgbọ ala. Nke a 3000K Dugara Ọka bọlbụ ọkụ na-azọpụta n'elu 80% ụgwọ ọkụ site dochie 250W MH / HPS / zoo. Ndụ ndụ ọkụ nke Led Corn Bulb USA bụ ihe karịrị 50,000 awa, ìhè akara ogo 360, ntụgharị ntụgharị dị elu....
100W UFO LED High Bay Light 13000Lm A na-eji ọkụ dị 100W nke ikuku dị elu na- arụ ọrụ n'ọmụmụ ihe, ụlọ nkwakọba ihe, ama egwuregwu Indoor, ụlọ mmepụta ihe, ụlọ nkwakọba ihe, nnukwu ụlọ ahịa. Mpempe mmiri 2.IP65 maka iji mpụga, mmiri na ájá na-eguzogide. 3. UFO duuru ìhè ulo oru bụ ọkaibe ọhụụ. Obere na olu dị...
Ike dị elu duuru ọka ọka 80W
Ike dị elu duuru ọka ọka 80W Bbier 8 0W butere bọlb bọl bọlbụ , igwe anaghị agba ọkụ maka LEDs na ọkwọ ụgbọ ala. Nke a Mere Ọka Oriọna 80W chekwaa ụgwọ ọkụ eletrik 80% site na dochie 250W MH / HPS / HID. Ndụ ndụ LED anyị nke 80W Led E26 Bulb Light karịa awa 50,000, ọkụ ogo ogo 360, ntụgharị ntụgharị agba dị elu. The...
80W duziri bọlbụ ọka 100-277VAC
80W duziri bọlbụ ọka 100-277VAC Bbier 8 0W butere bọlb bọl bọlbụ , igwe anaghị agba ọkụ maka LEDs na ọkwọ ụgbọ ala. Nke a butere oriọna ọka maka ebe a na-adọba ụgbọala chekwaa ụgwọ ọkụ eletrik 80% site na dochie 250W MH / HPS / HID. Ndụ ndụ LED nke anyị bulb ọka ọka 100W karịrị awa 50,000, ọkụ ogo ogo 360, akwụkwọ...
ETL Ìhè Ìhè Ọdọ 100W 12000LM
Kit Kit Light Kit 100w nwere ike iwepụta ihe dị elu ruo 12000lm. Ìhè Igwe ọkụ a bụ ndị nnọchi zuru oke maka 300W halogen bọlbụ. Ìhè Igwe ọkụ a 100w ya na ihe eji eme ihe eji eme ihe, ihe na ntukwasi obi,, nwere ike iwunye ihe nkuku ị choro. Site na ntulee IP66, enwere ike iji ihe mmetụta nke iju mmiri na-arụ ọrụ...
100W Ìhè Ìhè nke mgbago elu na osisi nkwado
Ìhè Ibe Anyị n’osisi 100w nwere ike iwepụta ihe dị elu ruo 12000lm. Ogige Ìhè a bụ ndị nnọchi zuru oke maka 300W halogen bọlbụ. Anyị jiri mgbanaka oriọna dị elu dị ka isi iyi nke ìhè maka anyị Ìhè Light-arịọnụ Ọdọ . Ọkwọ ụgbọ ala a na-enye ìhè ya na ihe eji eme ihe eji eme ihe, ihe na ntukwasi obi,, nwere ike iwunye...
100W Ìhè Ìhè nke Igwe Ọdọ 100000lm 4000k
Light Bulbs Walmart Walmart anyị 100w nwere ike iwepụta ihe dị elu ruo 12000lm. Ìhè Ìhè a Gburugburu bụ ndị nnọchi zuru oke maka 300W halogen bọlbụ. Anyị jiri mgbanaka oriọna dị elu dị ka isi iyi nke ìhè maka anyị Igwe ọkụ 90w . Igwe a na- eweta oriọna a ya na ihe eji eme ihe eji eme ihe, ihe na ntukwasi obi,, nwere...
Edobere ọkụ Ighalo Nke Udiri 100W 13000LM
Ìhè Ibe mmiri anyị 100w nwere ike imepụta ihe dị elu ruo 12000lm. Ìhè igwe ọkụ a rutere 100w bụ ndị nnọchi zuru oke maka 300W halogen bọlbụ. Anyị jiri mgbanaka oriọna dị elu dị ka isi iyi nke ìhè maka anyị Lightlọ ndozi ọkụ ide mmiri 100w . Igwe mmiri a na- akwụ 100 watt price ya na ihe eji eme ihe eji eme ihe, ihe na...
Nnukwu Ugwu Dị Iche Iche Na-enwu Ugwu 100W
Okpokoro Mgbachi nke Amazon Amazon bụ IP65, nke e mere maka ebe gas na ọdụ ụgbọ oloko. Nke a nwere ike ịgbanwu 100w dị mma maka nkwụsịtụ ma ọ bụ n'elu ebe echichi. Ndị na- eburu ọkụ ọkụ nwere 60W, 100W, 130W na 150W ike dị iche iche maka nhọrọ. Ugwu Elu Ugwu Anyị Dị Elu 100w bụ slim design slim na-achọ, dị mfe iji...
100W Mgbanya ọkụ maka ebe gas gas 12000LM
Oyiyi anyi nwere ike ime ka ikuku gas bu 10065 bu IP65, nke emere maka ikuku gas na ebe ndi ozo. Ike Igwe Igwe a dị mma maka nkwụsịtụ ma ọ bụ n'elu ebe echichi. Ihe na- enwu gbaa nwere 60W, 100W, 130W na 150W ike dị iche iche maka nhọrọ. Ube anyị na ntanye ọkụ bụ slim design slim na-achọ, dị mfe iji wụnye. Akwa...
Highbay 100w ọka Bọlbụ Highbay 100W ọka bọlbụ Agbanwu ọkụ ọkụ Agbanwuo ọkụ ọkụ Mgbapu ọkụ ọkụ Led 100W ọka Bulb 100W 5000k ọka bọlbụ ọkụ 100W Led ọka Bulb